Unobhala Wezokhenketho waseZambia uzisa iminyaka yamava njengelungu elitsha lebhodi kwiBhodi yoKhenketho yase-Afrika
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Unobhala Wezokhenketho waseZambia uzisa iminyaka yamava njengelungu elitsha lebhodi kwiBhodi yoKhenketho yase-Afrika
Iindaba zeManyano • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • abantu • Cinezela iZaziso • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba zaseZambia eziQhekezayo
IZambia ithatha indima entsha yobunkokeli kwiBhodi yoKhenketho yaseAfrika esandula ukusekwa. UGqirha Ngwira Mabvuto Percy nguNobhala Wokuqala Wezokhenketho kwiNdlu yoZakuzo yaseZambia eParis, eFrance. Ukwalilo iGosa Lonxibelelwano laseZambia kwi-UNWTO, kwaye ngoku ulilungu lebhodi yeBhodi yezoKhenketho yaseAfrika (i-ATB).
IZambia ithatha indawo yobunkokeli kwindawo entsha IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika. UGqirha Ngwira Mabvuto Percy nguNobhala Wokuqala Wezokhenketho kwiNdlu yoZakuzo yaseZambia eParis, eFrance. Ukwalilo iGosa Lonxibelelwano laseZambia kwi-UNWTO, kwaye ngoku ulilungu lebhodi yeBhodi yezoKhenketho yaseAfrika (i-ATB). Ungumsebenzi waseburhulumenteni onamava, ozakuzo, kunye noochwephesha oqeqeshiweyo nonamava ngaphezulu kweminyaka eli-15 yamava omsebenzi kwicandelo lokhenketho nangaphezulu kweminyaka emi-5 kubudlelwane bezopolitiko nakwamanye amazwe. Amava akhe obuchule kunye nophuhliso lomsebenzi omabini amanqanaba asekuhlaleni nakwamanye amazwe.
Yasekwa ngo-2018 njengeprojekthi ye- Umanyano lwaMazwe ngaMazwe lwaBalingani bamaKhenketho (ICTP), iBhodi yezoKhenketho yase-Afrika ngumbutho owaziwa kwilizwe liphela ngokusebenza njengesixhobo sophuhliso loxanduva kwezokhenketho ukuya nokubuya kwingingqi ye-Afrika.
Kubomi bakhe bobungcali kunye nobomi kule minyaka idlulileyo, uGqirha Ngwira ebesoloko eyingcali kwezokhenketho, idiploma, umcebisi, umhlohli, nomcebisi ophambili kubaphathiswa bezokhenketho nakwamanye amagosa aphezulu kurhulumente kwimicimbi yezokhenketho, ubudlelwane bamanye amazwe, idiplomacy, kunye nemicimbi ye-UNWTO.
Isifundiswa esinezifundo ezipapashiweyo ezisebenza egameni lakhe, uGqirha Ngwira unesidanga se-PhD kuLawulo lwezoKhenketho (eSpain), i-MA kwiDiplomatic Studies (e-United Kingdom), kwi-MSc. kuPhuhliso lwaMaphandle lwaMazwe ngaMazwe ngokukhethekileyo kuLawulo lwezoKhenketho (e-United Kingdom), i-BA kwiHotele, ezoKhenketho noLawulo lokuPheka (eHong Kong SAR, China), kunye neDiploma kuLawulo lweehotele nezoKhenketho (eZambia).
Njengomsebenzi waseburhulumenteni kunye nozakuzaku, umbono kaGqirha Ngwira kukhuthaza uphuhliso kunye nokuzalisekiswa kwemigaqo-nkqubo ejolise ekukhuthazeni uphuhliso oluzinzileyo olwenza igalelo kwinkululeko yezentlalo noqoqosho kumanqanaba engingqi nawamazwe aphesheya eZambia nakwezinye iindawo zehlabathi.
Ukuba yingcali kwezokhenketho, uGqirha Ngwira ukholelwa ekubeni ukhenketho lubalulekile ekukhuleni nakwezentlalo noqoqosho. Ukholelwa ekubeni ukhenketho lunamandla okukhuthaza nokwenza igalelo elibonakalayo kuphuhliso jikelele kwihlabathi.
IBhodi yoKhenketho yase-Afrika ibonelela ngenkxaso ehambelanayo, uphando olunengqiqo, kunye neziganeko ezintsha kumalungu ayo. Ngokubambisana namalungu abucala kunye namalungu ecandelo likarhulumente, i-ATB inyusa ukukhula okuzinzileyo, ixabiso, kunye nomgangatho wokuhamba nokhenketho ukuya, ukusuka, nase-Afrika.
Umbutho ubonelela ngobunkokheli kunye neengcebiso kumntu ngamnye nanjengokuhlangeneyo kwimibutho engamalungu kwaye uyanda kumathuba okuthengisa, ubudlelwane boluntu, utyalomali, uphawu, ukukhuthaza, kunye nokuseka iimarike zerhwebo.
I-ATB okwangoku iyabandakanyeka kwingqungquthela yezokhuseleko kunye nentlalontle kumazwe angamalungu, i-PR kunye nentengiso, ukufikelela kumajelo eendaba, ukuthatha inxaxheba kwezorhwebo, imiboniso yendlela, ii-webinar, kunye ne-MICE Africa.
Ukuphehlelelwa ngokusesikweni kombutho kucwangciselwe ukwenziwa kulo nyaka.
Ukufunda ngakumbi ngeBhodi yezoKhenketho ye-Afrika, indlela yokujoyina kunye nokuzibandakanya, cofa apha.